ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဖို့ အများအပြား ကျန်သေးကြောင်း သြစတြေလျဝန်ကြီးချုပ် ပြော — မြန်မာဌာန
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဖို့ အများအပြား ကျန်သေးကြောင်း သြစတြေလျဝန်ကြီးချုပ် ပြော
မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ်တွေ အတိုင်း အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်မှသာ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ယူကျင်းပမယ့် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်း သြစတြေလျဝန်ကြီးချုပ် မစ္စ Julia Gillard က ပြောလိုက်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ သြစတြေလျ ဝန်ကြီးချုပ်က သတင်းထောက်တွေကို အခုလို ပြောလိုက်တာပါ။
သြစတြေလျ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စ Julia Gillard ။
မြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်ပေါ်တိုးတက် မှုတွေကို သြစတြေလျနိုင်ငံက ကြိုဆိုကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အပါအဝင် ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်စရာတွေ အများအပြား ကျန်နေသေး ကြောင်း မစ္စ Julia Gillard က ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက် ပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို တိုက်ရိုက် ပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်း မစ္စ Julia Gillard က ပြောပါတယ်။
၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ယူကျင်းပမယ့် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ တက်မတက် ဆိုတာကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်ရောက်မှသာ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲတက်မယ့် နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ အခုအချိန်ကစပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုးတက် ပြောင်းလဲမှုတွေ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်ပေါ်တာကို မြင်တွေ့လိုကြတယ် ဆိုတာ သူ့အနေနဲ့ အလေးအနက် ပြောကြားလိုကြောင်း သြစတြေလျ ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
၂ဝ၁၄ မတိုင်ခင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် တိုက်တွန်း
မြန်မာ့အရေးကြားနာပွဲ သြစတြေးလျ လွှတ်တော်မှာ ကျင်းပ
စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို အရေးယူဖို့ သြစတြေးလျအမတ်တွေကို မြန်မာတွေတင်ပြ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
မြန်မာ့ပညာရေးအတွက် သြစတြေးလျက ဒေါ်လာ ၁၂ သန်း ထပ်မံကူညီမည်
ပြည်သူလိုလားတဲ့ ပြောင်းလဲမှု မဟုတ်ဟု ကိုကိုကြီး ပြောကြား
Don't talk big and in advance. When the times come, your country will just follow USA decision to atten or not to attend it. Right?